Avoaky Ary Office Supplies, boky voaravitra Clips, Badge Holders - Aiven
Tonga soa eto amin'ny NY WEBSITE
Aiven dia manokana ny mpanamboatra, nanaovany sy fampivelarana avoaky birao.
Office Tena ilaina Combo teo Square (252pcs)
Black boky voaravitra Clips in Color Box
Samihafa izay nampivoatra ny boky voaravitra Color Clips in Plastic Box
Phone Mobile Companion Storage sy nandamina
Ny hany fomba hahomby dia ny hanampy ny mpanjifa mba hahomby
Miorina Mafy 30 taona lasa izay in1989, Aiven no lehibe indrindra amin'ny boky voaravitra tsary mpanamboatra eto amin'izao tontolo izao amin'ny dingana mandeha ho azy tanteraka.
Aiven dia internationalized avoaky mpamatsy tanteraka Manufacturing, R & D, Fividianana Entana, QC sy ny mpanjifa.
Izahay koa ny planina-miasa amin'ny ekipa mpiara-miasa any Shina, Etazonia, Alemaina, sns Japana voafaritra kokoa famoronana
Tsy miara-miasa miaraka amin'ny mpiara-miasa US, tandremo nitsangana teo amin'ny sisin-tany ny tsena sy ny fironana ankehitriny foana jatony teti-dratsy na ny vokatra vaovao ho an'ny mpanjifa isan-taona.
Miorina Mafy 30 taona lasa izay tamin'ny 1989, Aiven On dia nitombo lasa lehibe indrindra fototry ny boky voaravitra famokarana horonantsary eto amin'izao tontolo izao ho toy ny internationalized avoaky mpanamboatra fitaovana sy ny birao amin'ny orinasa mpamokatra entana tanteraka, R & D sy ny mpanjifa. Fantatra isika noho ny azo antoka eo ny mpanjifa, maro amin'izy ireo no ho an'ny mpanjifa ny 30 taona mahery. Ny vokatra miainga amin'ny boky voaravitra Clips & isan-karazany Home Office Clips, Desktop Storage & mpikarakara, Pins & Tacks, mpitondra, Andriamby, dity Notes, nofonosiny entana feno ny hovidiana, Clipboards, Office & Fandraharahàna tena ilaina, Fanomezana Pack & Combo Set, Bookmarks, Name Badges, salama Office Series, Smart Phone & Computer Peripherals etc.
Asongadina & LATEST VOKATRA
Tsy manolotra ho an'ny mpanjifa ny vaovao an-jatony teti-dratsy na ny vokatra isan-taona
Panda endrika Plastic Drop Thumbtack
Mitambatra Set-Black Gold White Set
Bicyclo Box in hitakemotra Wrap
Mijoro miaraka Storage Set
Pen Holder Mety manolan-
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, na bebe kokoa momba ny vokatra vaovao farany & famolavolana, dia mifandraisa ny varotra ekipa izahay, dia ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.
Manampy ny mpanjifa mba hahomby
mamokatra boky voaravitra Office Clips , mpivarotra boky voaravitra Office Clips , Mpivarotra Office boky voaravitra Clips , Factory Office boky voaravitra Clips , Office boky voaravitra Clips Mpamokatra , Office boky voaravitra Clips Manufacturer ,